Wararka Xanta Suuqa Kala Iibsiga Ee Maanta, Grealish, Skriniar, Schuurs, Pochettino, Zidane, Hazard, Moyes, Williams
[ July 1, 2022 ] Man City oo Sharuud ku xirtay in xidiga Ake ka iibiso kooxda Chelsea	Wararka Ciyaaraha
[ July 1, 2022 ] Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Caawa Oo Khamiis Ah 30 June	Warka Xiisaha Leh
[ June 30, 2022 ] Arsenal oo Manchester United ku hogaaminayso Tartanka loogu jiro saxiixa Daafaca dhexe ee kooxda Ajax Lisandro Martinez	Suuqa kala iibsiga
[ June 30, 2022 ] Arsenal oo ku biirtay tartanka loogu jiro Gleison Breme	Suuqa kala iibsiga
[ June 30, 2022 ] Madaxa Juventus Maurizio Arrivabene oo qiray in Matthijs de Ligt ka tagayo kooxda Serie A xagaagan.	Suuqa kala iibsiga
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Xanta Suuqa Kala iibsiga ee Maanta, Grealish, Skriniar, Schuurs, Pochettino, Zidane, Hazard, Moyes, Williams
December 3, 2020 Suuqa kala iibsiga, Horyaalada Kale, Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha 0
Aston Villa ayaa rumaysan in qiimaha kabtankeeda khadka dhexe uga ciyaara ee Jack Grealish oo ah 25 jir lala xidhiidhinayo Manchester United aanu ka yaraan karaynin £100 milyan oo Gini. (Telegraph)
Xiddiga PSG iyo Brazil ee Neymar oo 28 jir ah ayaa sheegay inuu doonayo inuu ka garab ciyaaro Lionel Messi oo ay kala go’een markii uu Neymar ka tegay Barcelona sannadkii 2017kii. (ESPN)
Inter Milan ayaa isku diyaarinaysa inay iibiso difaaceeda Milan Skriniar oo ah 25 jir ay £45 milyan oo Gini ku doonayso Tottenham. Waxa laacibkan ay kooxdu diyaar u tahay inay iibiso bisha January. (Sun)
Difaaca reer Netherlands ee Perr Schuurs oo 21 jir ah, lalana xidhiidhinayo Liverpool ayaa ku adkaystay inaanu diyaar u ahayn inuu ka tago Ajax. (Mirror)
Tababarihii hore ee Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa hoggaanka u haya tababareyaasha u sharraxan inay Zinedine Zidane ka beddelaan Real Madrid, waxaanu ka horreeyaa Raul. (Marca)
Pochettino waxa la rumaysan yahay inuu isagu xiisaynayo inuu tago PSG haddii ay dhacdo inay kooxdu erido Thomas Tuchel, taas oo uu ka door bidi lahaa Real Madrid. (Talksport)
Zinedine Zidane ayaa lumiyey kalsoonida qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxdiisa, waxaana ciyaartoyda kasoo horjeeda ka mid ah Eden Hazard. (Sport)
West Ham ayaa kala hadlaysa tababaraheeda David Moyes inuu saxeexo heshiis cusub oo uu waqtiga ugu kordhinayo kooxdiisa, ka hor inta aanu dhamaanin qandaraaskiisa hore oo ku eg dhamaadka xili ciyaareedka. (Sky Sports)
Tababaraha Tottenahm ee Jose Mourinho ayaa sheegay in aanay wax isaga u yaalla ahayn haddii ay kooxdu iibinayso Delle Alli bisha January iyo haddii kaleba. (Telegraph)
Newcastle United waxay doonaysaa difaaca bidix ee Manchester United ee Brandon Williams, iyadoo 20 jirkan booska difaaca bidix ay kaga horreeyaan Luke Shaw iyo Alex Telles. (Newcastle Chronicle)
Tababaraha Arsenal ee Mikel Arteta waxa uu sheegay in agaasimaha farsamada kooxdaas ee Edu uu samaynayo qrosheyaal suuqa iibka ah bisha January, isla markaana suuqoodu noqon doono mid aanay cidina sii saadaalin karayn. (London Evening Standard)
Leicester City waxay xiisaynaysaa laacibka khadka dhexe ee reer Portugal ee William Carvalho oo ah 28 jir u ciyaara Real Betis. Foxes waxay qorshaynaysaa inay lasoo saxeexato laacibkan bisha January si ay iskugu xoojiso. (La Razon)
Khadka dhexe ee weerarka reer France ee Houssem Aouard oo 22 jir ah, lalana xidhiidhiyey Arsenal xagaagii ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu sii joogo Lyon. (RMC Sport)
Weeraryahanka Real Madrid Luka Jovic oo Qarka usaaran inuu u dhaqaaqo Fiorentina
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leeds United Kalvin Phillips oo Qarka u saaran inuu ku biirayo Manchester City
Maamulka Liverpool oo diiday in ay wax ka bedelaan qandaraaska Salah
Arsenal oo diyaarisay dalabkii seddexaad ee daafaca Lisandro Martinez
Chelsea oo wadahadalo kula jirta Deco oo ku saabsan garabka Leeds ee Raphinha
War Rasmi Ah: Juventus oo xaqiijisay in Morata uu ku laabtay Atletico Madrid
Chelsea oo soo bandhigtay heshiis gorgortan ah oo ay kula soo wareegayso daafaca Inter Milan de Vrij
Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maantay Oo Khamiis Ah 30 June
Weeraryahanka Everton Richarlison oo lagu eedeeyay inuu heshiis shaqsi ah la gaaray Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur oo ogolaatay inay heshiis amaah ah kula soo wareegto Daafaca Dhexe Barcelona Clement Lenglet
Barcelona oo iska iibineysa Xidiga Memphis Depay ee Holland
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Lucas Torreira “Ma jirto fursad aan ku sii joogo Arsenal”
Daafaca dhexe ee kooxda Napoli Kalidou Koulibaly oo u furan inuu u dhaqaaqo Chelsea.
Chelsea oo miiska saartay 55 milyan ginni oo ku aadan Saxiixa Raphinha